Samsung Galaxy J4 + na Galaxy J6 +: Official nkọwa | Androidsis
Yesnyaahụ ka anyị nwetara ihe oyiyi nke mbụ edozi na Samsung website banyere ekwentị abụọ, na otu ụbọchị gachara anyị nwere nkọwa zuru ezu banyere ndị a Galaxy J4 + na Galaxy J6 +. Ekwentị abụọ ahụ apụtaghachila na weebụsaịtị weebụsaịtị Korea, oge a zuru ezu. Yabụ na anyị enwetala nhazi na nkọwapụta nke ụdị ọhụrụ abụọ a.
Galaxy J4 + na Galaxy J6 + a na-abịa iwusi Samsung ike dị n'etiti. Anyị nwere ike ịhụ na ụlọ ọrụ ahụ na-achọ ịnye ihe ọhụrụ, dị iche na ihe anyị hụgoro na usoro ndị a. Ebe ọ bụ na e gosipụtara ihe ọhụrụ, na mgbakwunye na nkọwa dị iche iche.
Ọ bụ ihe ịtụnanya na ọdịiche ole na ole dị n’etiti ekwentị ndị a. Samsung gosipụtara ụdị abụọ yiri nke a, ma kpọọ ya ire nke ọma na mpaghara ahịa ya. Anyị ga-agwa gị karịa gbasara ụdị ndị a n'okpuru, n'otu n'otu.
1 Nkọwa Samsung Galaxy J4 +
2 Nkọwa Samsung Galaxy J6 +
Nkọwa Samsung Galaxy J4 +
Nke mbụ n'ime ụdị abụọ ahụ bụ nke anyị nwere ike ịkọwa dịka ihe dị mfe. Ebe ọ bụ na o nwere dịtụ ala RAM, na obere nchekwa ikike. Ma n'ihe banyere imewe, ọ bụ otu ihe ahụ dị ka nke gara aga, nwere otu nha ihuenyo. Ndị a bụ nkọwa zuru ezu nke Galaxy J4 +:
Ihuenyo: 6 sentimita asatọ na mkpebi 1480 x 720 pikselụ na nha 18: 9
Ihe nhazi: Quad-Core na-agba ọsọ na 1,4 GHz
Ebe nchekwa RAM: 2 / 3 GB
Esịtidem nchekwa: 16/32 GB (Gbasaa na microSD)
Rear igwefoto: 13 MP na oghere f / 1.9 na ikanam Flash
Igwe n'ihu: 5 MP nwere oghere f / 2.2
Batrị: 3.300 mAh
Sistemụ nrụọrụ: Android 8.1 Oreo na Samsung Experience
Njikọ: 4G / LTE, Bluetooth 4.2, microUSB
Akụkụ: X x 161.4 76.9 7.9 mm
Ibu ibu: 178 grams
Ndị ọzọ: NFC
Nkọwa Samsung Galaxy J6 +
Nke abuo, ekwentị a na-echere anyị, nke zuru oke n'ime ha abụọ. Anyị nwere ike ịhụ na ọ nwere njikọta mma nke RAM na nchekwa dị n'ime. Na mgbakwunye, anyị agaghị echefu na ihe nlere a nwere igwefoto azụ abụọ, nke na-amalite ịnweta ọnụnọ na ekwentị Samsung. Modeldị zuru ezu zuru oke, nke ahụ ga-adịkwa oke ọnụ. Banyere imewe, dị ka anyị kwuru, ọ bụ otu. Ndị a bụ nkọwa zuru ezu nke Galaxy J6 +:
Ebe nchekwa RAM: 3 / 4 GB
Esịtidem nchekwa: 32/64 GB (Amplables na microSD)
Rear igwefoto: 13 MP + 5 MP nwere oghere f / 1.9 na f / 2.2 na LED Flash
Ndị ọzọ: Onye mkpisiaka mkpịsị aka n'akụkụ, NFC
Ọ bụ ihe ijuanya na Samsung ahọrọla ekwentị abụọ yiri nke a. Ebe ọ bụ na ọkwa a na-ahụ anya, nhazi nke ụdị abụọ ahụ bụ otu, yana otu ihuenyo ahụ. Ihuenyo, nke a kpọsara dị ka ihuenyo na-enweghị njedebe, dị ka nke njedebe ya dị elu, mana nke ahụ abụghị n'ezie ikpe ahụ. Nke ahụ bụụrụ obere ndakpọ olileanya maka ọtụtụ ndị, dịka ụlọ ọrụ Korea tụrụ anya na ụdị dị iche.
Ọ bụ ezie na usoro nke nkọwa, Galaxy J4 + na Galaxy J6 + adịghị ada mba. Modelsdị abụọ ahụ na-agbaso, ọ bụkwa ihe ijuanya na anyị nwere NFC na ụdị abụọ ahụ, na mgbakwunye na ihe mmetụta mkpịsị aka n'akụkụ. Yabụ ekwentị ndị a enweghị ihe ọ bụla.
Nke a bụ akụkụ nke anyị enweghị data n'oge a. Anyị nwere nkọwa na atụmatụ nke ụdị Samsung ndị ọhụrụ a na anyị, ma ọ dịghị ihe a maara banyere ọnụahịa nke ụdị ndị a. Ihe ezi uche dị na ya bụ na ọnụahịa nke Galaxy J6 + ga-adị elu karịa nke Galaxy J4 +, mana a maghị ihe ọnụahịa nke ụdị ọ bụla a ga-abụ. Anyị enweghị data na ụbọchị ịhapụ ya.
Nke bụ eziokwu bụ na o kwesịghị iwe ogologo oge ka ozi a rute. Yabụ anyị ga-ege ntị na ozi ndị ọzọ ụlọ ọrụ na-enye na nke a. Kedu ihe ị chere banyere Galaxy J4 + na Galaxy J6 +?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Samsung Galaxy J4 + na Galaxy J6 + bụ ndị ọchịchị